Vol. 17 I-Meyi, 1913. 2
INDODA iyawuthanda umsebenzi wokucinga, kodwa ayifane icinge ngayo okanye ayikhe icinge ngayo ukuze iyazi ukuba yintoni, isebenza njani, zeziphi izinto ezisetyenzisiweyo, zithini iinkqubo kunye neziphumo zomsebenzi, kwaye yintoni eyona njongo yokucinga . Njengamanye amagama, anje ngombono, ingqondo, ingcinga, ukucinga kusoloko kusetyenzwa ngokungakhethiyo okanye ngaphandle kwentsingiselo eqinisekileyo. Abantu bathetha ngokucamngca ngokudumisa, njengofikelelo okanye uphawu lwabantu abakhulu abanamandla namandla abo abumba isiphelo sezizwe nehlabathi; kwaye kwa aba bantu bayakuthetha njengoluphawu lwabanye abangasebenziyo, abanokungqubana kwezimilo kunye neengqondo ezibuthathaka; Imibono enjalo iluncedo, amaphupha abo akanakuze atshabalale, balindela ukuba kungenzeki; kwaye, bajongwe yimfesane okanye badelele.
Ukucamngca kuya kuqhubeka ukuhambisa indawo. Iyakuthwala inyuke inyuke iye kwezinye kwaye ziye enzonzobileni. Inokwenza okanye ingakhuphe amadoda.
Ukucinga akuyiyo into engachazekiyo yamaphupha, iifashoni, ukubona izinto ezingekhoyo, umbono, ukukhohlisa, ii-nothings ezingenanto. Ukucamngca kwenza izinto. Izinto zenziwa ngombono. Into eyenziwayo ekucingeni inokwenyani kulowo uyenzayo njengemveliso yokucinga xa uthelekiswa nokusetyenziswa komzimba.
Injalo into eyaziwa ngumntu. Umntu uyazi malunga nezinto ngokumqhubela kuye okanye ngokujikisa ingqalelo yakhe kuzo. Akayiqondi le nto ayaziyo, kude kube emva kokuba enike ingqalelo kwaye azame ukucinga ngayo nokuyiqonda. Xa ecinga kwaye ezama ukuyiqonda, ukucinga kuya kumchazela ngeendlela ezintsha; Uya kubona iintsingiselo ezintsha kwiifom ezindala; uya kufunda ukwenza iifom; kwaye uya kuqonda kwaye akhangele phambili kubugcisa bokugqibela bokucinga, ekungakuthabatheni nasekwenzeni ubom.
Ukucamngca akuxhomekekanga kwixesha okanye kwindawo, nangona ngamanye amaxesha ubuchwephesha bomntu bukhululekile kwaye busebenza ngakumbi kunakwabanye, kwaye kukho iindawo ezilunge ngakumbi kunabanye emsebenzini, hayi okokudlala, wengcinga. Kuxhomekeka kwimeko, ubushushu, umlingiswa, uphuhliso lomntu. Ixesha kunye nendawo zinento yokwenza nalowo uphuphayo onqwenela ukuba izinto zenzeke kwaye zilindele amathuba kunye neemoods, kodwa umcingeli udala amathuba, uqhuba i-moods kuye, wenza izinto zenzeke. Ngaye, ukucinga kuyasebenza nangaliphi na ixesha kwaye nakweyiphi na indawo.
Abo bacinga ukuba banembonakalo yenyani okanye eyakhayo, eyokugqibela okanye esebenzayo, amaphupha okanye abavavanyi. Iingcamango zephupha ziphononongwa ziimvakalelo kunye nezinto zazo; ukucinga komcabango kusenokwenzeka ukuba kubangelwa yingcinga yakhe. Umphuphi anovelwano kwaye unokwedlule, umntu ocinga ukuba unovelwano kwaye unethemba. Umphuphi ngumntu onengqondo yakhe, esebenzisa umfanekiso wakhe wefakhalthi, abonakalisa okanye athabathe iifom zezinto zemvakalelo okanye zeengcinga, kwaye ngubani otshintshwe zezi. Umlinganisi okanye umlinganisi ngulowo uzisa ngobunjani bakhe bomfanekiso, umbandela, okhokelwa yingcinga yakhe, ngokokwazi kwakhe nangokuzimisela ngamandla akhe intando. Iingcamango ezivakalayo kunye nezandi ezivuselelayo kunye neefom ziyatsa umphuphi. Ingqondo yakhe ibalandela kwaye idlale kunye nabo kwimigca yabo, okanye ibanjiwe kwaye ibanjwe ngabo, kwaye umfanekiso wakhe wobuso uqhutywa kwaye unyanzelekile ukuba ubanike intetho njengoko beyalela. Umntu ocingelayo uyawucoca umfanekiso wakhe kwaye avale imvo yakhe ngokucingisisa ade ayifumane ingcinga yakhe. Njengoko imbewu iphonswa esibelekweni somhlaba, ngokunjalo nengqondo inikwe kumfanekiso wobuso. Ezinye iingcinga azibandakanywa.
Ukuphumla ekugqibeleni kulwazi lwasemva kwengqondo kunye namandla eentando, imaginor ivuselela ubuchwephesha bomfanekiso ngcinga yakhe ade aqale umsebenzi wokucinga. Ngokolwazi lwamva lwe-imaginor nangamandla e-intando, ingcinga ithatha ubomi kwi-faculty yomfanekiso. Iimvakalelo ke ziye zibizelwe ukusetyenziswa kwaye nganye isebenza kwimisebenzi yokucinga. Le ngcinga ithathe indawo yokucinga, ngumba ophambili kwiqela okanye kumaqela eefom, ezithatha umbala wazo kuwo kunye nefuthe lazo de kube kwenziwe umsebenzi wokucinga.
Ukusebenza kwengqondo kubonisiwe kwimeko yombhali. Ngokucinga, ujika ukukhanya kwengqondo yakhe kumxholo anqwenela ukuwuvelisa kwaye akhuthazeke njengoko ecinga. Izinzwa zakhe azinakumnceda, ziyaphazamisa kwaye ziyabhidisa. Ngokuqhubeka ukucinga ucacisa kwaye ugxila ekukhanyiseni kwengqondo yakhe ade afumane umxholo wengcinga yakhe. Inokungena kumbono wakhe wengqondo ngokuthe ngcembe ngokungathi kukungxama okunzima. Isenokubonakala ngokuqaqanjelwa njengombane okanye imitha yelanga. Le ayisiyiyo eyemvakalelo. Yintoni le ingenava. Emva koko ubuchwephesha bomfanekiso wakhe busebenza, kwaye iimvakalelo zakhe ziyazibandakanya ekuzihlawuliseni abalinganiswa abasebenza kwifilimu yakhe. Izinto zomhlaba ngaphandle zisetyenziswa ngaphakathi kude kube ngoku zinokusebenza njengezinto ezibonakalayo zokuseta umxholo kwihlabathi lakhe ngaphakathi. Njengoko abalinganiswa bekhula beyimilo, ingcinga nganye inegalelo ngokongeza ithoni okanye intshukumo okanye imilo okanye umzimba. Zonke zenziwe zaphila kwimeko yazo apho umbhali ebabizele khona ngomsebenzi wokucinga.
Ukuqiqa kunokwenzeka kuye wonke umntu. Ngamanye amandla kunye nobuchule bokucinga banqunyelwe kwinqanaba elincinci; nabanye baphuhliswe ngendlela engaqhelekanga.
Amandla okucinga yile: amandla okunqwenela, amandla okucinga, amandla okwenza ukuthanda, amandla okuqonda, amandla okwenza. Umnqweno yinkqubo yesiphithiphithi, eyomeleleyo, etsala kunye nengqondo engenangqondo, efuna intetho kunye nolwaneliseko ngokusebenzisa amandla. Ukucinga kukugxininiswa kokukhanya kwengqondo kumxholo wengcinga. Ukuthanda kukunyanzelisa, ngcinga, ngaloo nto yakhetha ukuyenza. Ukuziva ngamehlo kudlulisa okubonisiweyo okufunyenwe zizitho zengqondo ukuya kumandla engqondo. Ukwenza into kukwenza ukuthanda kwakhe okanye ukuthanda kwakhe.
La magunya avela kulwazi olufunyenwe yimbali ngaphambili. Iingcamango ezidumileyo azichanekanga, ukuba ubugcisa bokucinga sisipho sendalo, ukuba amandla asetyenzisiweyo ekucingeleni zizinto zendalo okanye isiphumo selifa. Amagama izipho zendalo, indlalifa kunye nobungqina zithetha kuphela into efikelelwe yinzame zomntu. Ubugcisa kunye nokubanika kwamandla okucinga kunye namandla asetyenziswa ekucingeni lilifa kobu bomi bangoku bokuyinxalenye yento umntu awayeyifumene ngumzamo kubomi bakhe bangaphambili. Abo banamandla amancinci okanye umnqweno wokucinga baye benza umzamo omncinci wokufumana.
Ukuqiqa kunokuphuhliswa. Abo banokuncinci, banokuhlakulela okuninzi. Abo banokuninzi banokuhlakulela okungakumbi. Iimpawu zokunceda ziluncedo, kodwa oko akuthethi kuphuhliso lokucinga. Iimpazamo ezingalunganga ziya kuba zizinto ezinesiphene, kodwa azinakho ukuthintela ukusebenza kwengcinga.
Ukuqiqa kufunyenwe ngoqeqesho kunye nokusebenza kwengqondo emsebenzini wokucinga. Ukuqeqesha ingqondo yokucinga, khetha umxholo ongabonakaliyo kwaye uzibandakanye nokucinga ngawo amaxesha ngamaxesha de kubonwe kwaye kuqondwe ingqondo.
Umntu uphuhlisa ukuqiqa ukuya kwinqanaba apho eqeqesha ingqondo ngenjongo. Inkcubeko yeethamsanqa yongeza amaxabiso athile angaqhelekanga kwiziphumo zomsebenzi wokucinga. Kodwa ubugcisa ekucingeni buzinziswe engqondweni kwaye bugqithiselwa okanye buchaphazela iimvakalelo kusetyenziswa amandla engqondo anento yokwenza nokucinga.
Ukugqitywa kwinombolo kaJuni